Rai'salwasaare Farmaajo"Hay'adaha gargaarka waa inay u soo guuraan Muqdisho" – SBC
Rai'salwasaare Farmaajo"Hay'adaha gargaarka waa inay u soo guuraan Muqdisho"
Ra’iisul waaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta mar kale ku celiyay in hay’adaha gargaarka ee Qarammada Midoobay ay ku yimaadaan magaalada Muqdisho muddo saddex bilood ah, isagoo sheegay in dowaldda KMG ah ay sugayso ammaankooda.
Mudane Farmaajo ayaa sheegay in hay’adaha gargaarka ay tahay inay dalka ku shaqeeyaan si dhaqaalaha loogu talogalay shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiiyo, isagoo intaas ku daray in hay’adaha gargaarka qaarkood ay walaac ka muujiyeen ammaanka Muqdisho balse ay u caddeeyeen in ammaankooda ay dowladdu sugayso.
“Waa muhiim in 90-maalmood ee aan horay u qabannay aan ku helno in hay’adaha gargaarka ee Qarammada Midoobay ay ugu soo guuraan Muqdisho si ay dalka uga howlgalaan,” ayuu yiri Farmaajo oo maanta wareysi siinayay raadiyaha dowladda taageera, isagoo sheegay in Muqdisho aysan ka ammaan xumayn Afgaanistaan iyo Ciraaq.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa intaas ku daray in dhankooda ay damaanad-qaadi doonaan ammaanka hay’adaha gargaarka, isagoo sheegay in baaqii ay horay u soo saareen uu yahay mid muqadas ah oo aan waxba laga badalayn.
“Haddii ay imaan waayaan waxaan u arkaynaa inay yihiin dad aysan ujeedadoodu ahayn inay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed, balse ay dano shaqsi ah leeyihiin, innagana nooma cuntamayso in si shaqsi ah magaca Soomaaliya wax loogu qaato,” ayuu Farmaajo hadalkiisa daba-dhigay.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in go’aankoodan uu yahay mid daba socda hadalkii xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay Bak Ki-Moon uu hogay ugu sheegay in hay’adaha ee Qarammada Midoobay ay u guuraan gudaha Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa toddobaad ka hor ku dhawaaqday in muddo saddex bilood ah ay ha’yadaha gargaarka ee Qarammada Midoobay ee fadhigoodu yahay dalka Kenya ay ugu soo guuraan dalka si ay ula socdaan xaaladaha ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Nin wanaagsan says:
Apriil 15, 2011 at 10:29 am
Hadalkan ma ahan mid qiimo leh Muqdisho ma nabad baa maxaad dadka u haysaa nin iska hadlay ayaad tahay